Cirifka macdanta ayaa u badan 5-PC rim, oo sidoo kale loo yaqaan shan geesood ah, waxaa lagu sameeyaa shan qaybood oo saldhig u ah, giraanta qufulka, kursiga kuusha iyo laba siddo oo dhinaca ah. Tirada caarada macdanta caanka ah waa 25.00-25 / 3.5, 36.00-25 / 1.5, 27.00-29 / 3.0,28.00-33 / 3.5,17.00-35 / 3.5,19.5-49 / 4.0, 29.00-57 / 6.0, ilaa 63 ″, qaar ka mid ah khafiifka laga bilaabo cabbirka 51 "ilaa 63" sidoo kale waa 7-PC. Qodista macdantu waa miisaan culus, culeys culus iyo xawaare sare. HYWG waxay soo bandhigtaa qarar macdan oo tayo sare leh. Faa'iidadayadu waxay tahay inaan haysanno macdan birteena ah oo soo saarta qaybaha darafta sida giraanta qufulka, flange, giraanta dhinaca, kursiga kuusha kaligeen, waxaan maareynaa tayo heer sare ah waxaanan siino qiimo macquul ah.
Weelka wiishka wiishka lagu gaadho oo lagu rido wiishka wax lagu duubo iyo kuwa hareeraha ka ah weelka madhan ee Kalmar
Shuruudaha loogu talagalay weelka wiishka wiishka oo gaadho khafiifka dhejiska aad ayuu u sareeyaa, caadi ahaan wuxuu xambaaraa culeys aad u sarreeya (in ka badan 20 tan) iyo xawaare sare, waxaan dillaacnaa tijaabooyin fara badan oo ah 13.00 x 33 geesood oo ka soo baxa kuwa wax gaadha iyo kuwa gacanta ku haya weel madhan oo sida caadiga ah ku socda dusha sare. Qaabka EM ayaa had iyo jeer ku jajaban giraanta giraanta oo waxay helayaan nolol gaaban 2 illaa 3 isbeddel taayir. Wareegyada EV-ku waxay ina siinayaan nolol dheeri ah oo suurtagal ah 5 illaa 6 isbeddelada taayirka, natiijadan waxaan u maleynayaa in EV rim uu qaadi doono culeyska markii uu aad u sarreeyo laakiin xawaaraha ayaa u baahan doona in loo ilaaliyo sida ugu macquulsan uguna wanaagsan ee wadista wadista suurtagal ah Mid ka mid ah faa'iidooyinka HYWG ayaa ah inaan soo saarno dhammaan qaybaha qarkiisa annaga oo ay ku jiraan EM iyo EV qaabka gogosha, kursiga kuusha iyo giraanta qufulka, waxaan bixinnaa tayo la isku halleyn karo iyo noocyo kala duwan oo badeecooyin ah oo ka soo jeeda cirifka ugu yar ilaa cirifka ugu weyn.
Qaybaha OTR Rim cabirkoodu kala duwan yahay 8 ″ ilaa 63 ″
Qalabka Rimwaa giraan qufulka, giraanta dhinaca, kursiga kuusha, fure darawalka iyo flange loogu talagalay noocyada kala duwan ee qarka Anaga HYWG waa mid kamid ah soo saarayaasha yar ee wax soo saari kara labadabaqarkaoo qar buuxi Laga soo bilaabo dabayaaqadii 1990s HYWG wuxuu bilaabay inuu soo saaroqaybaha qarwaxaana lasiinayay hogaamiyaasha caalamiga ee OTR sida Titan iyo GKN. Maanta HYWG waxay leedahay noocyo buuxa oo ahqaybaha qar laga bilaabo cabbirka 8 ″ ilaa 63 ″, laga bilaabo qaybaha qotomiska OTR ilaa qaybaha forklift qarka, dhammaantood qaybaha qar yihiin 100% lagu sameeyay guriga, waxaan bixinnaa tayo la isku halleyn karo iyo qiimo macquul ah.
Qodista Macdanta sidoo kale waa nooc ka mid ah qararka OTR waxaana loo adeegsadaa inta badan mashiinnada wax lagu qodo sida xamuulka weyn ee gawaarida, dozer, gaari xamuul iwm Macdanta qafiska waxaa loo dhisay xaalado adag, waxay u baahan tahay inay qaado miisaan culus, culeys culus iyo xawaare sare. Cirifka macdanta ee jaban waxay sababi kartaa shil culus iyo dhaqaale xumo weyn, waxay u baahan tahay inay noqoto mid la isku halleyn karo, lagu kalsoonaan karo. HYWG waxay soo bandhigtaa qarar macdan oo tayo sare leh.
Cirifka warshadaha ee shirkadda Boom wiishka waxsoosaarka Shiinaha
Iqarka dushiisa waxaa aad u isticmaala noocyo badan oo gawaari ah sida wiishka kor u kaca, cagaf cagafyada, wiishka, maareynta taleefanka, dhajiyaha dhabarka dambe, qotomaha gawaarida iwm. geesaha warshadaha sidaa darteed way adag tahay in la kala saaro. Laakiin badankoodu waa qaab dhismeedka 1-PC-ga oo cabirkiisu ka hooseeyo 25 inji. Laga soo bilaabo 2017 HYWG wuxuu bilaabay inuu soo saarocirifka warshadaha sababta oo ah macaamiisheenna badan ee OE ayaa leh dalab. Volvo Korea waxay waydiisatay HYWG inay horumarisogeesaha warshadaha qodista iyo gawaarida gawaarida. Kooxda Zhongce Rubber waxay waydiisatay HYWG inay horumarisogeesaha warshadaha kor u qaadista. Sidaa darteed 2020 HYWG waxay warshad cusub ka furtay gobolka Jiaozuo Henan si diirada loo saaro iqarka dushiisa soo-saar, awoodda sannadlaha ah ee cirifka warshadaha waxaa loogu talagalay 300,000 rimis sanadkiiba.